Project QT Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Tetikasa QT Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android
Salama daholo, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana lalao Android Puzzle mahatalanjona hafa izay fantatra amin'ny anarana hoe Project QT Apk. Izy io dia lalao an-tserasera marobe, izay ahitanao ireo singa mitovy amin'ny famongorana ireo biby goavambe.
Araka ny fantatrao dia misy lalao hafa, izay manolotra ireo serivisy ireo. Noho izany, maninona izahay no manome sosokevitra an'ity fampiharana ity? Misy antony maro, izay mahatonga ity lalao ity ho tsara lavitra noho ny hafa. Ny sary dia iray amin'ireo mampiavaka an'ity lalao ity.
Izy io koa dia manolotra fomba tantara sy endri-javatra maro hafa, izay hozarainay aminao. Raha handeha hilalao ity lalao ity ianao, dia manoro hevitra anao izahay hahafantatra kely alohan'ny hilalao ny lalao. Noho izany, mijanòna kely eto aminay raha te hahalala bebe kokoa.
Topimaso momba ny Project QT Apk
Izy io dia lalao simulation Android, izay tsy maintsy ampifanarahinao amin'ireo singa hitokona ny fahavalonao. Eto izahay miaraka amin'ny kinova farany, izay manolotra ny endri-tsoratra farany, sarintany, iraka ary endri-javatra hafa maro hafa farany.
Ny tena tantara amin'ity lalao ity dia ny tsy nety ny andrana iray ary misy otrikaretina mampidi-doza mivoaka, izay misy fiantraikany amin'ny olombelona rehetra. Ka ianao irery no afaka mandresy ny viriosy ary mamonjy ny olombelona rehetra.
Manolotra anao ny endri-tsoratra isan-karazany, ny endri-tsoratra rehetra dia zazavavy. Mila mamoha litera vaovao sy vaovao ianao amin'ny famitana iraka. Isaky ny vita ny iraka dia hahazo vola madinika, laharana ary loka hafa ianao. Azonao atao ny mividy an'io ho takalon'ny vola madinika ary mampiasa azy ireo hamaha boaty harena.
Azonao atao ny manosika ny laharanao amin'ny famitana ny iraka laharana. Io no fomba haingana indrindra hanosehana ny laharanao. Amin'ny voalohany dia hanomboka amin'ny laharana 1 ianao, miaraka amin'ny iraka laharana tsirairay dia hitombo ny laharanao. Hahazo loka ihany koa ianao amin'ny laharana tsirairay ary hisokatra koa ny endri-tsoratra samihafa.
ao amin'ny RPG tsy maintsy manao fitambarana singa ianao, misy singa efatra amin'ity lalao ity. Tsy maintsy manambatra singa mitovy ianao. Tsy maintsy manao fitambarana lava araka izay azo atao ianao mba hamely mafy kokoa.
Misy singa manokana ihany koa azo alaina, izay azonao ampifanarahina amin'ny singa hafa. Ny singa manokana samihafa dia manolotra endri-javatra samihafa amin'ny fanorotoroana ny hafa. Ny iray amin'ireo singa manokana dia ny manolotra crush in X-direction avy amin'ny toerana misy azy. Izy io koa dia manolotra jiro, izay manala ireo singa mitovy amin'ny solaitrabe.
anarana Projet QT
Anaran'ny fonosana com.ignite.qt
Endri-javatra lehibe an'ny Project QT Apk
Betsaka ny rindranasa Android mahavariana, azonao zahana amin'ny fampiasana azy. Izahay hizara ny sasany amin'ireo tena mampiavaka an'ity fampiharana ity aminao. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra etsy ambany.
Ahoana ny fampidinana ny Project QT 8.0?
Raha te haka ity rindranasa ity dia mila mahita ny bokotra fampidinana eto amin'ity pejy ity ianao. Ho hita eo an-tampon'ny sy ambany amin'ity pejy ity izy, kitiho eo izy ary miandry segondra vitsy mandra-pahatongan'ny fisintomana. Manome rohy miasa azo antoka sy miasa izahay aorian'ny fitsapana azy amin'ny fampitomboana fitaovana, noho izany aza mahatsiaro ho voaro rehefa manindry ny bokotra misintona.
Tsy maintsy manao fanovana vitsivitsy alohan'ny fizotry ny fametrahana. Mandehana fotsiny amin'ny toe-javatra ary sokafy ny tontonana fiarovana, ny marika eo amin'ny 'Loharano tsy fantatra'. Ankehitriny ianao dia afaka mametraka ny rakitra Apk amin'ny fitaovana Android anao amin'ny fotoana iray.
Project QT Apk no lalao tsara indrindra nilalao sy nankafizanao ny fotoananao kalitao. Afaka mandany ora maro ianao amin'ny filalaovana ity lalao ity nefa tsy mankaleo. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka milalao azy amin'ny namanao. Aza adino ny miverina amin'ny antsika Website.
Sokajy Games, simulation Tags Projet QT, Tetikasa QT 8.0, Project QT apk, RPG Post Fikarohana
Alfa Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]